मनमोहन कार्डियो सेन्टरले गर्‍यो एक वर्षमा १९ सयको शल्यक्रिया
बैशाख १३, २०७४ बुधवार २१:२६:५६ प्रकाशित
काठमाडौं– महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालसँगै रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले एक वर्षमा एक हजार ९ सयलाई शल्यक्रिया सेवा दिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सेन्टरबाट एक हजार तीन सयले क्याथप्रोस्युडर (मुटु सम्बन्धी) सेवा लिएका छन्। बुधबार वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राडा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले सेवा लिने बिरामीको संख्याबारे जानकारी गराएका हुन्।
सेन्टरले मुटु उपचार सेवाका साथै फोक्सो र रक्तनलीको विधामा हुनुपर्ने सबै सुविधा विस्तार गरेको जनाएको छ। सरकारले मुटुका बिरामीलाई दिने सुविधाबाट मात्रै सेन्टरले साढे १२ करोड बराबरको निःशुल्क सेवा दिएको बताइएको छ। यसैगरी आफ्नौ आन्तरिक स्रोतबाट थप साढे दुई करोडको गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएको डा. श्रेष्ठले बताए।
एक सय बेड क्षमताको अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरेर यो वर्ष फार्मेसीबाट मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। यसैगरी, अस्पतालले १७ करोड आम्दानी गरेकोमा १५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा खर्चिएको जनाएको छ।
सेन्टरको पहिचान बढ्दै जाँदा चाप पनि बढिरहेकाले नयाँ भवन निर्माण थाल्ने तयारी गरिएको वार्षिकोत्सवका अवसरमा घोषणा गरियो। साढे दुई वर्षभित्र बनिसक्ने भवनमा भिभिआइपीका लागि सुइटको व्यवस्था हुनुका साथै नेपालमा हालसम्म नभएको हाइब्रिड अप्रेसन थिएटर पनि रहने योजना अघि सारिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले मनमोहन सेन्टर महाराजगन्जप्रति बिरामीले गरेको भरोसा कायम राख्न आफूहरु लागिपरेको बताए। भने, ‘हामी सानो ठाउँमा छौँ। बिरामीको भीड बढ्दो छ किनकि भरोसा पनि बढ्दो छ। त्यसैले नयाँ भवन, नयाँ प्रविधि र नयाँ सेवा थप्नै पर्नेछ।’
यो वर्ष मात्रै सेन्टरबाट दुई जनाले कार्डियोलोजीमा एमडी(पिएचडी) र एक जनाले सिटिभिएसमा एमसिएच(पिएचडी) गरेका छन् । तीमध्ये दुई जनाले सेन्टरबाटै सेवा दिन थालेको बताइएको छ।
सेन्टर तीनटा उद्देश्य मध्ये दुईटा उद्देश्यमा खरो उत्रेको सेन्टरका वरिष्ठ मुटु सर्जन डा. भगवान कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘हामीले रिसर्च, सेवा र शिक्षा तीनटा उद्देश्य लिएकाछौं । तीमध्ये सेवा र शिक्षा दिइरका छौँ तर रिसर्च हुन सकिरहेको छैन।’ रिसर्च हुन नसकेकै कारण देशको नीति नियममा सुझाव दिन नसकेको बताए। उनले डाक्टरहरुलाई रिसर्चमा समेत उक्साउनका लागि इन्सेटिभको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘पैसाकै लागि काम गर्ने भन्ने त होइन, तर रिसर्च गर्दा लगानी लाग्छ। त्यो पूरा गर्ने वतावरण बनाउनुर्छ।’